ဘာတွေတောင်းလို့ရလဲ — MYSTERY ZILLION
June 2007 edited October 2008 in Project
MYSTERY ZILLION Product ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။ ဘာတွေတောင်းလို့ရလဲ။ ဂျူးဂျူး ဆီမှာရှိတာတွေလဲ သူများတွေ အသုံးတဲ့မယ်ဆိုရင်ပေးချင်ပါတယ်။
MYSTERY ZILLION ကရေး ဘယ်လိုမျိုး project တွေလုပ်သင့်တယ်...
ဘယ်ဟာတွေကို ပြင်ပြီး project တွေလုပ်သင့်လဲ...
အသုံးတည့်မယ့်ဟာတွေကို General -> Other အောက်မှာ မျှေ၀နိုင်ပါတယ်..
ဒါမှ မဟုတ် ဆိုင်ရာ Topic တွေမှာလည်း မျှေ၀နိုင်ပါတယ်ဗျာ...:6:
နာ့အတွက်... ကားတစ်စီး.. လေယာဉ်ပျံတစ်စီး.. ဒုံးကျဉ်တစ်စီး.. တောင်းတော့မလို့..:10:
တော်တေးဒါပေ့ါ.. အတားညန်တွားရို့ :d
DES project လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ပါလားဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ လေ့လာထားတာလေးနဲနဲရှိပါတယ်။ ၀ိုင်းရေးမယ်ဆို ခနလေးပါ။ စိတ်၀င်စားကြလားမသိဘူးခင်ဗျ။
DES ဆိုတာ ဘာပါလဲခင်ဗျာ.. သေသေချာချာလေး ရှင်းပြပေးလို့ရမလား.. :5:
DES ဆိုတာ Data Encryption Standard ကို အတိုကောက်ခေါ်တာပါ။ encryption algorithms တမျိုးပါပဲ။ ဒီ algorithms မှာ, XOR နဲ့ permutation (နေရာပြောင်းလဲခြင်း) methods တွေကို အဆင့်များစွာသုံးထားပါတယ်။ ခုတော့ ၄င်းကို တချို့ကျောင်းတွေ မှာ introductory level လောက်မှာချပြီး သင်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ မာစတာ မတိုင်ခင်သင်ပေးပါတယ်။ နဲနဲပို အဆင့်မြင့်တာကတော့ Triple DES နဲ့ AES- Advanced Encryption Standard တွေပါပဲ။ နောက်လ ၅ ရက်လောက်ဆိုအားပါပြီ။ အဲဒီအခါကျရင် DES algorithm ကို အသေအချာ ဥပမာများ code များနဲ့ ရှင်းလင်းပြပါမယ်။ code များကို Turbo C ++ Version 3.0 ကို အသုံးပြုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ အကြမ်းဖြင်းရေးထားတာဖြစ်လို့ ပိုပြီး code optimize လုပ်စရာတွေတော့ကျန်ပါသေးတယ်။ နားလည်သူများ ၀င်ရောက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းသွားမှာပါ။ ၄င်းကို open source အနေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားရေးထားတဲ့သူများရှိရင် လဲ ပေးစေချင်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်ပြီးရေးမယ်ဆို ပိုကောင်းသွားမှာပါ။
ဒီဖိုရမ်နဲ့တော့ ဘာမှတော့ မဆိုင်ဘူး.....ဒါပေမယ့် ဒီထဲမှာပဲပြောတော့မယ်...
ကိုစုံစမ်းရေ...ဖိုရမ် စကင်လေးက လှလာတယ်ဗျာ....
ကျွန်တော် ဆရာပြောတဲ့ အတိုင်း ယူဇာရန့် ကို လုပ်ပါသေးတယ်..မရဘူးဗျာ...
ကိုရဲနောင် ဖိုရမ်က သိပ်မလှ သလိုပဲ...ကျွန်တော့် အမြင်ပါ...
ကိုရဲနောင် ဗီဒီယို ဆာဗာက နှေးသလိုပဲ...
ု(၁)ko admin တို ့ရေ ...Forum List မှာ Networking ကို ထည် ့ပေးစေချင်တယ်။
ဘယ် အောက် မှာ ထည် ့ထည့်ပါ။
ပါ စေ ချင် ပါ တယ်။
(၂)Job List ကို ပြောပြပေးတာ.....တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ computer job မပာုတ်တဲ့other job lists ကို ထည် ့ပေးတာ........computer သမားမပာုတ်တဲ့တခြားသူတွေကိုစွဲဆောင်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
UN ရဲ့computer job လေးတွေရှိရင်...ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကိုစေတန်...ကျွန်တော်ကတော်. Carry On လို့အားပေးပါတယ်။ နောက်မှWebsite ကိုသေချာဖတ်ပြီး အကြံပေးပါ ့မယ်။ Computer Field က မပာုတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဆွဲဆောင်စေတဲ့ Forum Topics လေးတွေ တင် ပေးပါအုံး။
(၃) အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါလို ့ပဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။ကျွန်တော်လည်း ၀င်ရောက်အားဖြည် ့ပေး ပါအုံးမယ်။
ChemistRomance wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ပါ... ကျွန်တော် forum list ထဲမှာ networking ထည့်ပေးပါ့မယ်... ဘယ်လို list ထည့်ရမလဲ... networking ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံး၀မသိလို့ပါ... ဖြစ်နိုင်ရင်
-- ISA Server
ကျွန်တော်တို့ computer က လွဲပြီး တခြား စိတ်၀င်စားစရာတွေ ထည့်သွင်းဖို့ အစီအစဉ်လုံး၀ မရှိပါဘူး.. စတင်တည်ထောင် ကတည်းက computer နည်းပညာအတွက် သီးသန့်ထောင်ခဲ့တာပါ...
ကျွန်တော်အားရင်သေချာရေးပေးပါ ့မယ်။ networking ကိုပါ။
လော လောဆယ်တော့ ဒီပာာလေး အရင် တင်ပေးစေချင်တယ်။
Anti-Virus Usage ပါ။ Update လုပ်နည်း တို ့၊Quarentineတို ့၊Deleteတို ့ပါ။
AVG, Kasperskey, Norton, Gdata(AVK), NOD32, BitDefender,
Virus ......solution ပါ။
eg.error တွေ ့တယ်ဆိုပါတော့၊ အဲဒီပာာက ...Virusလား၊ ဘာလားပေါ ့ဗျာ။ Manual ဆိုဘယ်လို
ရှင်းရမယ်ပေါ ့ဗျာ။ အစရှိသည် ့ဖြင့်ပေါ့Bro ရာ။
Topics က ...Anti-Virus Vs Virus ပေါ ့...
ဆရာကြီးတော ့မပာုုတ်ပါ ....တတ်နိုင်သလောက်ပါ။
networking zone is sufficient
in this zone, we can post abt the network theories, ip addressing, subnetting, supernetting, configuring and maintaining the network and internetworking devices etc...!
we needahacking topic to discuss
i promise u guyz that we'll share as much as we know
ထောက်ခံပါသည်:1:သိတဲ ့တတ်တဲ ့သူတွေေ၀ပေးရင်တော ့ကျတော်တို ့တွေ...အသိတိုးတာပေါ ့:6:
hack နည်းထက် ကာကွယ်နည်းတွေကို ပြောရင်ပို အကျိုးရှိနိုင်။
ခုတွေ့ရသလောက် မည်သို့ မည်ပုံ ဟက်ပုံ၊ ဟက်လို့ရကြောင်းတွေသာ ပြောနေကြသည်။
ပြီးလျှင် ကာကွယ်နည်းတွေပါပြော ပြကြစေခြင်သည်။
ဟက်နည်းများထက် ဟက်နည်းတင်ပြပြီးလျှင် ကာကွယ်နည်းကို တခါတည်းဆက် ပြောသွားစေခြင်။
ifaseparate topic is provided for us we'll discuss not only abt the hacking techniques, but also will discuss about the prevention methodz.
eg ~ in the linux hacking section we'll discuss abt the SSH and how to deny users in SSH from accessing from the network. then, we'll discuss how to bypass this limitation. then, we'll discuss how to fix this vulnerability of limitation bypass etc...
in the sniffing topic, we'll discuss how to sniff packets from the network and how to prevent from the sniffers
in the DOS section, we'll discuss how to perform DOS and DDOS attacks. then, we'll discuss how to prevent from those attacks.
in the web hacking section, we'll discuss how to perform the hackings and how can we prevent from those hackings.
(we're sure that whatever we discuss about, our movies will be included)
(practical will be shown in the movie and we'll explain the theoretical knowledge in the forum)